Umthandazo iNdumiso 91 Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Sakhe sava malunga ne Umthandazo iNdumiso 91 Kwaye kuyaziwa ukuba umthandazo onjalo uyakwazi ukubaphilisa ngokwengqondo nangokomoya abo bawenzayo kwaye ngenxa yoko, ufumene ukuthandwa okukhulu phakathi kwawo onke amakholwa. Kungenxa yoko le nto zonke iinkcukacha zalo mthandazo mhle ziya kunikwa apha ngezantsi kweli nqaku.
Intsingiselo kunye nokunye
1 Umthandazo iNdumiso 91
2 Umthandazo iNdumiso 91
3 Intsingiselo yomthandazo iNdumiso 91
3.1 Inomboloe yokuqala
3.2 Umthandazo uNdumiso 91: Inani lesiBini
3.3 Inani leSithathu
3.4 Umthandazo uNdumiso 91: Inani lesine
3.5 Inani lesihlanu
Kuwo onke amakholwa, akukho nto ibaluleke ngaphezu kokuqalisa usuku ngomthandazo wokubonga ngolunye usuku lobomi olupheleleyo lwempilo. Ukuba ufumanisa ukuba ufunda eli nqaku, kungenxa yokuba uyinxalenye yeqela labantu abasikelelweyo ngokukwazi ukuvula amehlo akho kwakhona yiyo loo nto ke kuwe, ukwenza umthandazo kusasa kuyinto engcwele.
Ngenxa yoko, namhlanje siza kukushiya ngeNdumiso oyithandayo, njengoko kusaziwa njengokugqibelela ngokupheleleyo ukuqala usuku oluzele luxolo kwaye nokutsala amandla aqinisekileyo osuku lwakho kunye nobomi bakho.
Eli nqaku liza kufumana iifayile ze- Umthandazo iNdumiso 91, leyo kangangeminyaka emininzi ibigqalwa njengeyona ndumiso inamandla kuba amandla ayo ayamangalisa. Kwelinye icala, kubalulekile ukukhankanya ukuba lo gama umthandazo usenziwa, lonke ukholo nothando kufuneka lubekwe kuwo.
«91 Ulohlala ekhayeni lOsenyangweni na?
Uya kuhlala emthunzini kaSomandla.
2 Ndiya kuthi kuYehova: Ndilithemba lam, nqaba yam;
Thixo wam, endiza kukholosa ngaye.
3 Uya kukukhulula emgibeni womzingeli,
4 Ngeentsiba zayo iya kukugubungela,
Uya kuphila phantsi kwamaphiko akhe.
Ikhaka nekhaka yinyaniso yakhe.
5 Akuyi koyika unkwantyo lwasebusuku,
Nalutolo lubaleka emini,
6 Nendyikitya yokufa ehamba ebumnyameni;
Nesibetho esitshabalalisa emini emaqanda.
7 Kuya kuwela iwaka ecaleni kwakho,
Neshumi lamawaka ngasekunene kwakho;
Kodwa ayiyi kuza kuwe.
8 Ngokuqinisekileyo uya kujonga ngamehlo akho
Kwaye ubona umvuzo wabangendawo.
9 Ngenxa enokuba uthembele ngoYehova, ithemba lam
KOsenyangweni kwigumbi lakho,
10 Akukho bubi buya kukuhlela,
Akukho sibetho siyakuchukumisa ikhaya lakho.
11 Kuba uya kuthuma iingelosi zakhe phezu kwakho,
Ngamana zingakugcina ezindleleni zakho zonke.
12 Baza kukuthwala ngezandla zabo,
Ukuze unyawo lwakho lungakhubeki elityeni.
13 Uya kunyathela engonyameni nakwi-asp;
Uya kunyathela inyana lengonyama kunye nenamba.
14 Ngenxa yokuba enamathele kum, ndomsiza;
Ndiya kumbeka phezulu, ngokuba elazi igama lam.
15 Uya kubiza kum, ndiphendule;
Ndiya kuba naye ndibandezelekile;
Ndiya kumhlangula ndimzukise.
16 Ndiya kumanelisa ngemihla emide,
Ndibonise usindiso lwam.
Intsingiselo ye- Umthandazo iNdumiso 91
Ezinye iintsingiselo ezifunyenwe emva kokufunda nokutolika Umthandazo iNdumiso 91:
Kwivesi yokuqala, umfanekiso obonakalayo ngulowo uzimele kwindawo ekhuselekileyo ecaleni koThixo, apho aya kukhuselwa bubukho bakhe. Ngokunjalo, sijonga ukuba ngoobani abahlala okanye abahlala kwindawo efihlakeleyo kaThixo kwaye aba baya kuba ngabo bakhuselwe bubukho obunamandla onke.
Umthandazo uNdumiso 91: Inani lesiBini
Imfundiso ecacileyo yayo yonke into yeyokuba kwikholwa, kuyakufuneka ukuba izithembiso ezifanelekileyo zinikezwe nguThixo njengokuhlala kubudlelane obugqibeleleyo naye, ungaze wenze ngokuthanda kwakhe kodwa ulawula ukwenza yonke into ayibhengezayo uThixo. Kwelinye icala, kufuneka azinikele ngokupheleleyo kwinkonzo kaThixo kwaye azinikele ngokupheleleyo kwigunya likaYesu.
Kwangokunjalo, ivesi yesibini isixelela ukuba kufuneka sihlale sithembele kuThixo, ukongeza ekumazini njengendawo yokusabela apho asinika khona amandla; Kwangokunjalo, akufuneki sixhomekeke emandleni ethu nasengqondweni yethu ukusisindisa engozini.
Kufuneka siqaphele ukuba loluphi ukhuseleko lwethu lokwenyani, olubonisa ukholo: AmaHebhere 11: 6 athi,"Kwaye ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukumkholisa uThixo, kuba nabani na osondela kuThixo kufuneka akholelwe ukuba ukhona kwaye uyabavuza abo bamfunayo."
Into esinokuyifunda kwiNdumiso 91: 3-8 kukuba uThixo uyakwazi ukukhusela abo bangengobakhe kuba akazukuvumela naluphi na uhlobo lobungozi okanye isoyikiso ebomini, ngaphandle kwabo bahluza isandla sakhe sobukhosi. Kodwa ngokusekwe kwisifo sokugqibela sesono, abo bakholelwa ukuba bahlangulwe ngonaphakade kwisiphelo esingenakuphepheka, akukho kufa kwindawo efihlakeleyo yoPhezukonke.
Ewe, kukho izoyikiso zokufa esijongana nazo mihla le, nangona kunjalo, ezi zinokuyitshabalalisa imizimba yethu efayo. Ukufa Umzimba womntu okholwayo ubalwa kuphela njengomnyango ovulekileyo wobomi obungunaphakade ecaleni koThixo wethu.
Umthandazo uNdumiso 91: Inani lesine
UThixo wabelana ngesithembiso esingaqhelekanga kwindinyana yesithoba neyeshumi apho iqala ngemeko kwaye iphela ngesiphumo; kwisibhengezo esineemeko ezithile, imeko kufuneka ihlale izalisekiswa ngaphambi kokuba kufunyanwe isithembiso.
Ukuba awukufumani ukukhuselwa nguThixo, kufuneka usoloko ubuza ukuba "Ngaba ndibuphila ubomi bam phambi koThixo nangokukhanya kwendalo yakhe kunye neempawu zakhe?" Kwaye emva koko, emva kokuba uyifezekisile loo meko, uya kuba nakho ukufikelela kweso sithembiso.
Kwindinyana ezintathu zokugqibela, uThixo ngokwakhe uyakwazi ukubhengeza iintsikelelo ezisibhozo kwabo bazingcwalisele inkonzo yakhe. Uthando oluchazwe kwindima yeshumi elinesine, kuloo meko, luthetha ukonwaba, ukunamathela; Oku kuyakusifundisa ukuba uThixo unyanzele kuphela ukuba azinikezele kwabo bamvuyela ngokwenyani kwaye bakwazi ukumzukisa.
UThixo uyabanelisa abo banelungelo kwiintsikelelo zobomi obude kwaye uya kubabonisa uSindiso, olu inguhlobo olupheleleyo lobabalo lukaThixo.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi imithandazo engakumbi yokubulela iNkosi yethu, siyakumema ukuba ufunde le enye malunga Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa.